फाल्गुन २८, २०७६ सारङ्गी न्यूज
पोखरा । मिस नेपाल २०२० छान्न हिडेन ट्रेजर टोली पोखरा आइपुगेको छ । हिडेन ट्रेजर नेपालका निर्देशक दिवाकारराज कर्णिकार र मिस नेपाल इन्टरनेश्नल २०१८ कि विजेता रोनाली अमात्य पोखरा अडिसनका लागि पोखरा आइपुगेका हुन् ।
भोलि फागुन २९ गते साँझ ५ बजे वाटरफ्रन्ट रिसोर्ट लेकसाइडमा अनलाइन र प्रत्यक्ष ?पमा फारम भनेका प्रतियोगीह?का लागि वरिएन्टेसन क्लास र पर्सी चैत्र ३० गते पूर्वाह्न ११ बजे अडिसन हुने हिडेन ट्रेजरका निर्देशक दिवाकरराज कर्णिकारले बताउनुभयो ।
मिस नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय छविको राष्ट्रिय कार्यक्रम बनेको र केही गर्न चाहने युवतीह?का लागि सही प्लेटफर्म भएकाले पनि यस कार्यक्रममा सहभागी हुन पोखरेली युवतीह?लाई आग्रह गर्नुभयो । विभिन्न सहर र कुनाकुनाका प्रतिभालाई उजागर गर्नका लागि यसपालि नेपालका ८ वटा सहरह? काठमाडौँ, पोखरा, धरान, चितवन, बुटवल, वीरगञ्ज, बिर्तामोड, धनगढीबाट अडिसनबाट छानिएका युवतीह?लाई काठकाडौँमा ६ हप्ता ट्रेनिङ दिने कर्णिकारले बताउनुभयो ।
रजिष्ट्रेशन फि जम्मा २००० लाग्ने र मिस नेपालको जर्नीभरिमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च आयोजकले बेहोर्ने भएकाले जस्तोसुकै आर्थिक अवस्थाका प्रतियोगीलाई सहज हुने कर्णिकारले बताउनुभयो । मिस नेपाल इन्टरनेशल २०१८ रोनाली अमात्यले मिस नेपालको जर्नीबारे बताउँदै कुनै सङ्कोच नमानी अडिसनमा भाग लिएर आफ्नो भविष्यको प्लेटफर्ममा सहभागी हुन आग्रह गरिन् ।
त्यस्तै यो वर्ष पुरस्कारको राशी बढाएर ? दुई लाख ५० हजारसहित त्रैमासिक भत्ता पनि पुरस्कारको ?पमा प्रदान गरिनेछ । मिस नेपालमा सहभागिताका लागि प्लस टु उत्तीर्ण, १८ देखि २६ वर्ष ननाघेका र ५ फिट ४ इन्च उचाइ हुनपर्ने छ । मे १५ तारिख काठमाडौँमा हुने मिस नेपाल प्रतियोगितामा मिस पोखरा, मिस अष्ट्रेलिया, मिस युरोपले अडिसन नदिई सिधै इन्ट्री पाउनेछ ।
बुधवार, फाल्गुन २८, २०७६, ०८:०३:००